လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် မီတာဖတ်နိုင်ပြီး ကျသင့်ငွေ ပေးချေနိုင်သော စနစ် တောင်ဥက္ကလာနှင့် ရွှေပေါ?? - Yangon Media Group
လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် မီတာဖတ်နိုင်ပြီး ကျသင့်ငွေ ပေးချေနိုင်သော စနစ် တောင်ဥက္ကလာနှင့် ရွှေပေါ??
လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် အသုံးပြုထားသည့် မီတာယူနစ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သလို လျှပ်စစ်အသုံးပြုခငွေကိုချေနိုင်သည့် Advanced Metering Infrastructure(AMI) စနစ်အား တောင်ဥက္ကလာပနှင့် ရွှေပေါက်ကံမြို့နယ်တို့တွင် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်ကျော်ဦးက ပြောသည်။
နေပြည်တော်လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတွင် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်ကပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ၎င်းကအထက်ပါ အတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းက ဒေါပုံမြို့ကို Pilot Project နဲ့ စပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ အခု ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ ရွေးချယ်ထားတာက တောင်ဥက္ကလာနဲ့ ရွှေပေါက်ကံမြို့နယ်တွေကိုဆက်လုပ်မယ်”ဟု ဦးအောင် ကျော်ဦးက ပြောသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒေါပုံမြို့နယ်တွင် (AMI) စနစ် Pilot Project ကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၆ ရက်ကစတင်ခဲ့ရာ လျှပ်စစ်သုံးစွဲသူပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ခဲ့ သောကြောင့် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ဒီ(AMI) စနစ်ကို ကျွန်တော်တို့က Pilot Project အနေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်တာ အချိန်သုံး၊ လေးလလောက်ကြာမယ်။ ဒီစနစ်ရဲ့အားသာချက်က လူထုက မီတာပုံးကအသုံးပြုတဲ့ မီတာယူနစ်ကို သူတို့ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကနေကြည့်လို့ရတယ်။ အဓိကက လျှပ်စစ်မီတာသုံးတာကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသိနိုင်တဲ့အတွက် သူတို့လျှပ် စစ်သုံးတာများနေတယ်ဆိုရင် ဝင်ငွေနဲ့တွက်ချက်ပြီး လျှပ်စစ်သုံးစွဲ မှု လျှော့ချင်လျှော့လို့ရတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ယင်းစနစ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာမှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာအထိ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုကို ပျမ်းမျှ ၁ဝ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း အထိလျှော့ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဦးအောင်ကျော်ဦး၏ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ရခိုင် ပဋိပက္ခကြောင့် စီးပွားရေး တစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်ဟု ဒီချုပ်စီးပွားရေး ကော်မတီဝင်ပြော
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် Environmental Studies ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာသင်တန်း စတင် ဖွင့်လှစ်မည??
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ကျန်ရှိ လုပ်ငန်းစဉ်များကို လာမည့် လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအ
Game of Thrones ရုပ်ရှင် နမူနာ ထွက်ပြီ
ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာပြီဟု စတင်အသိပေးခဲ့သူ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အသက် (၈၇) နှစ်တွင် ကွယ်လွန်